अभिनेता ऋषि कपुरको पूरा नभएको त्यो सपना. - Yessamachar
अभिनेता ऋषि कपुरको पूरा नभएको त्यो सपना.
मुम्बई । बलिउडका दिग्गज अभिनेता ऋषि कपुरको ३० अप्रिलमा निधन भयो । क्यानसर रोगबाट पीडित कपुरको निधनले उनका परिवारका साथै पूरै बलिउड स्तब्ध भयो । उनको निधनसँगै उनले देखेका कैयौं सपना पनि उनीसँगै गए । जसमध्ये ऋषि निकै उत्साहित भएर देखिरहेको सपना थियो, छोरा तथा अभिनेता रणबीरसँग एउटै चलचित्रमा खेल्ने ।
हालै आएको खबरका अनुसार अभिनेता ऋषि कपुर र रणवीर कपुर गुजराती चलचित्र ‘चाल जीवी लाइए’ को हिन्दी रिमेकमा सँगै काम गर्ने तय भएको थियो । चलचित्र निर्माताहरुको ऋषि कपुरका म्यानेजरसँग कुराकानी फाइनल भइसकेको थियो । तर लकडाउनका कारण चलचित्रको काम रोकियो ।चलचित्र निर्माण गर्न लागेको कम्पनीका सीईओ रितेश जालानले मिडियासँग कुरा गर्दै भने, “हामीहरु ऋषि र रणवीरलाई लिएर चलचित्र गर्न लागेको भएर चर्चामा थियौं । हामीले ऋषि कपुरका म्यानेजरसँग मार्चमा यस विषयमा कुरा गरेका थियौं तर कोरोना भाइरसका कारण कुरा अघि बढ्न सकेन यसैबीच उहाँको निधनले सबैलाई स्तब्ध बनायो ।”
खबरअनुसार यस चलचित्र बुबाछोराको कथामा आधारित छ । रियल बुबाछोरा जोडी रिलमा पनि बुबाछोरा नै भएर काम गर्न लागेका थिए । कथामा छोरा व्यस्त भएर बुबालाई समय दिन सकेका हुँदैनन् । बुबाले अन्तिम इच्छा सुनाउछन र व्यस्त छोरा आफ्नो सबैकाम छोडेर बुबाको अन्तिम इच्छा पूरा गर्न लागि पर्छन् । ऋषिलाई चलचित्रको कथा निकै मन परेको थियो र उनी चलचित्रका लागि निकै उत्साहित पनि थिए ।
Previous articleप्रचण्डसँग ओली आक्रोसित, आफू नै कार्यकारी रहेको स्पष्टोक्ति
Next articleउपत्यकामा पछिल्लो चौबीस घण्टामा २३ दुर्घटना, २१ जना घाइते